Maxkamadda gobolka Nugaal oo maanta dhageysaneysa kiis dil iyo kufsi ah oo loo heysto 7-nin – Hornafrik Media Network
Maxkamadda gobolka Nugaal oo maanta dhageysaneysa kiis dil iyo kufsi ah oo loo heysto 7-nin
Waxaa maanta lagu balansanyahay in maxkamadda derajada koowaad ee gobolka Nugaal ay ka bilaabato dhageysiga dacwad loo heysto todoba nin oo ku eedeysan kiiskii dilka iyo kufsiga iskugu jiray ee sanadkii hore magaalada Garowe loogu geystay marxuum Hodan Axmed Maxamed Shanleyste.
Garowe xalay waxaa u hoyday Aabaha dhalay gabadha la dilay ee Hodan Axmed Shanlayste oo dheysiga dacwadaha la xariira kiiskan uu isaga u xayirnaa.
Allaha u naxariistee Hodan waxay aheyd gabar xaas ah, waxaana 11-kii bishii April ee sanadkii 2019-kii kufsi iyo dil loogu gaystay magaalada Garowe ee xarunta maamulka Puntland.
Maxkamadda ayaa seddax jeer oo hore dib u dhigtay kiiska marxuum Hodan Shanleyste, kadib codsi uga yimid qoyskii ay ka dhalatay, sida la sheegay.
Afar maalin ka hor ayey Maxkamaddu isku dayday in la furo garma-qalka kiiskan, iyadoo todobada nin ee loo heysto ay maxamadda kasoo hor muuqdeen, balse waxaa la shaaciyey maalinkaas in qoyska marxuum Hodan Shanlayste ay dalbadeen in kiiskaan dib loo dhigo, inta uu ka imaanayo Hodan Aabeheed Axmed Shanleyste oo dalka ka maqnaa.
Arbacada maanta ah ayaana lagu madalsanaa in la foro dhageysiga garmaqalka kiiska Hodan Shanleyste oo marar badan dib u dhacay, waxaana loo heystaa oo haatan u xiran falkii loo geystay todoba ruux oo rag ah.
Dowladda iyo saamileyda siyaasada oo loogu baaqay in ay isu diyaariyaan doorasho waqtigeeda ku dhacda